जुन कुमारित्वको संकेत वा प्रमाण हो - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
जुन कुमारित्वको संकेत वा प्रमाण हो
म १८ वर्षीया विवाहित युवती हुँ। भनिन्छ, जब एक भर्जिन युवतीले पहिलो पटक यौनसम्पर्क गर्छिन्, रगत आउँछ, जुन कुमारित्वको संकेत वा प्रमाण हो, तर मेरो रगत आएन। यो कसरी हुन्छ ? कसलाई यस्तो हुन्छ र कसलाई हुँदैन ?
पहिले योनिच्छद च्यातिएको वा नच्यातिएका आधारमा युवतीको कुमारित्वको आँकलन गरिन्थ्यो। प्रत्य रूपमा यो च्यातिएको थाहा पाउन विभिन्न उपाय गरिन्थ्यो। विवाहपछि नवविवाहितासँग पहिलो यौनसम्पर्कमा रगत आउनुलाई नै योनिच्छद च्यातिएको प्रमाणका रूपमा लिइन्थ्यो अर्थात् अत-योनि भएको प्रमाण। मध्ययुगमा कन्याको पिसाब र स्तनलाई आधार बनाइएको पाइन्छ। अतयोनि कन्याको पिसाब सफा र चम्किलो हुने र स्तन झोल्लिएको नभएर केही माथितिर फर्किएको हुने विश्वास गरिन्थ्यो। भारत वर्षमा पनि 'कुकरीकी रश्म', पानीकी धीज अनि अग्निपरीाजस्ता परिण गरिएको कुरा उल्लेख छ। अहिले विशेष गरेर एचआईभीको प्रकोप बढ्दै गएको सन्दर्भमा कौमार्य परीण कतिपय आधुनिक समाजमा पुन: चर्चाको विषय बनेको छ। महिलाहरू विवाहपूर्व एकदमै पवित्र हुनुपर्ने कडा मूल्य-मान्यता भएका केही मुलुकमा योनिच्छद छ-छैन भनेर परीण गर्ने चलन फैलँदो छ, तर यस्ता कुरा महिलामाथिको हिंसा हो भनेर महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध गर्ने गरेका छन्।